Dagaallo Dad Badan Ku Dhinteen Oo Ka Dhacay Galbeedka dalka Itoobiya.
Wednesday October 03, 2018 - 11:56:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanayo wadanka Ethiopia ayaa sheegaya in iska hor imaadyo ka dhacay xuduuda ay wadaagaan gobolka Oromia iyo BinShangol Gomez lagu dilay kudhawaad 50 qof oo u dhashay wadankaasi.
Telefeshinka rasmiga ah ee afka dowlada ku hadlo ayaa baahiyey in iska hor imaadyo kasoo cusboonaadan Mandiqada Kamaash oo dhacda xuduuda gobolka Orimia uu la wadaago gobolka BanShangool Gomez oo dhaca galbeedka wadanka.
Inta la xaqiijiyey ilaa 44 qof oo Ethiopian ah ayaa ku dhintay iska hor imaadyadan oo soo bilowday maalinki khamiista, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay tobanaan kale, halka ay barakeceen dad tiradooda ay gaareyso 60Kun oo qof.
Dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxo hubeysan oo aan heybtooda la garaneyn ay weerar kusoo qaadeen mandiqada Kamaash, kadibna ay bilaabeen inay dadka xasuuq kula dhaqaaqaan, balse marki danbe dhalin yaro deegaan ah oo is abaabulay ay dagaal kala hor tageen.
Taliska Amxaarada ee fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ayaa lagusoo waramayaa in dhanka Mandiqada Kamaash oo dhacda galbeedka wadanka ay u direen Kumanaan askari oo katirsan ciidanka Military, si ay usoo afjaraan iska hor imaadyada halkaas ka soconaya.
Madaxa isgaarsiinta gobolka Oromia ayaa eedeyn dusha uga tuuray dadka ka danbeeyo falalkan, kuwaas oo uu kutilmaamay inay yihiin dad kasoo horjeeda, Nabadeynta iyo dib u hagaajinta maamul ee ka soconaya gudaha wadanka, howlahaas oo uu hor bood ka yahay Raisal wasaare Abiy Axmed oo asal ahaan kasoo jeedo qowmiyada Oromada.
Waxa uu yiri maamulka gobolka Oromia waxa uu aqbalay dad ka badan 30Kun oo qof oo kasoo barakacay deeganada ay iska hor imaadyado ka dheceen, iyagoo geynaya Kaamam ku yaala Mandiqada Naqmati iyo Gembi oo gobolka Oromia katirsan.
Bartimihi bishii aan soo dhaafnay ayay Ethiopia marti galisay dagaalo iyo dibad baxyo wata rabshado oo ka dhacay deegaano kala duwan oo katirsan caasimada Addis Ababa iyo gobolka ay oromadu degto, falalkaas oo ay ku dhintaan tiro dad ah.
Taliska police-ka Oromia ayaa 17ki Bishii aan soo dhaafnay shaaciyey dhimashada in kabadan 26 qof, kuwaas oo lagu dilay fatqaladaha amaan daro ee kasoconayo gobolka, sidoo kalena waxa uu tilmaamay in falalkaas loo qabtay ilaa 200 oo qof, oo lagu eedeynayo inay colaada horinayeen.
Dhacdooyinkan is daba jooga ah ee kadhacaya gudaha dalka Ethiopia ayaa imaanaya xilli xukuumada uu hogaamiyo Abiy Axmed ay heshiisyo kala duwan la saxiixatay, ururadii mucaaradka ee wadanka ka jiray, kuwaas oo kala ah, Genbot7 , OLF, iyo ONLF, waxaana la rumeysan yahay in qaar kamid ah uraradaasi ay wali ku lug leeyihiin arimaha hada ka soconaya gudaha wadanka.
Qarax ay ku dhinteen Saraakiil Katirsan Ciidanka Alpha Group oo ka dhacay deegaanka Jaziira.